Shina W-endrika Elastic Rail Fastening SKL1 Rail Clip ho an'ny mpanamboatra sy ny mpamatsy ny Railway System | Lanling
Lanja: 0.48kg / pcs
Mamokatra rakitsary Nabla amin'ny alàlan'ny vy lohataona izahay. Ny hamafin'izy ireo dia 51-55 HRC ary manana fananana elastika tena tsara izy ireo. Miaraka amin'ny enta-mavesatra 2500daN, aorian'ny fitsapana roa voalohany, ny fiovan'ny haavo aorian'ny famoahana dia 0.45mm fotsiny ary aorian'ny fitsapana telo hafa dia 0,1mm monja ny haavon'ny haavony. Ny clip Nabla vita dia azo nolokoina mena na loko hafa arakaraka ny takian'ny mpanjifanay.
Teo aloha: Elastic Fastener E2031 Rail Clip ho an'ny rafitra fanamafisana ny lalamby
Manaraka: W-endrika Elastic Rail Fastening SKL3 Rail Clip ho an'ny rafitra fastening Railway
rafitra fifamatorana lalamby, clip elastika, e2055, Gauge Lock Clip, mpamatsy lalamby, clip amin'ny lalamby,